‘चुँजी’ संगीतकार निलमको के छ त ‘आँखैमा…’ (भिडियोसहित) | www.aagopani.com Halloween Costume ideas 2015
‘चुँजी’ संगीतकार निलमको के छ त ‘आँखैमा…’ (भिडियोसहित)
काठमाडौैं, २३ कार्तिक । संगीतकार तथा गीतकार निलम रोजु राईलाई यहाँहरुले कसरी चिन्नुहुन्छ ? ‘कुसल संगीतकार अनि गीतकार’ । हो, निलम कुसल संगीतकार तथा गीतकार मात्र नभएर गायिकासमेत हुन् । यो निलमको बाहिरी परिचय हो । यिनीमा अर्को पनि परिचय लुकेको छ । त्यो के हो त ? निलम भन्छिन्, ‘म चुँजी पनि छु । त्यसैले म आफूलाई ‘चुँजी’ संगीकार भन्न रुचाउँछु ।’ तर, उनी संगीतबाहेक अन्य सन्दर्भमा चुँजी छ्रैनन् बरु फस्यौली छिन् ।
यिनै व्यवहारमा फस्यौली र संगीतमा चुँजी निलमको शब्द तथा संगीतमा एक गीत एवं भिडियो रिलिज भएको छ । गीत रहेको छ, ‘आँखैमा…।’
यी चुँजी संगीतकार तथा गीतकारको आँखामा यसपटक उदाउँदी गायिका सुनिता थेगिम सुब्बा परेकी छन् । सुनिताले ‘आँखैमा…’ बोलको गीतलाई आफ्नो स्वरले यति सुमधुर बनाएकी छन् कि गीत सुन्दा लाग्छ, ‘निलमको आँखामा अर्थात् रोजाइमा त्यतिकै सुनिता परेकी हैन रहेछ ।’ आफूलाई छोटो समयमै यस क्षेत्रमा स्थापित गराएकी संगीतकार निलमले पनि सुनिताको खुलेरै प्रशंसा गरिन् । निलमले भनिन्, ‘म आफ्नो सिर्जना जो–सुकैलाई गाउन दिन्नँ । तर, मलाई सुनिताको स्वर चित्त बुझ्यो ।’ हुन त सुनिता पछिल्लो समय नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा राम्रै चर्चा बटुलिरहेकी गायिका हुन् । तर, निलमको संगीतमा भने पहिलोपटक स्वर दिएकी हुन् । निलमको संगीतमा राजेशपायल राई, अञ्जु पन्त, मेलिना राई, दीपा लामा जस्ता नयाँ पुराना चर्चित गायक÷गायिकाले स्वर दिइसकेका छन् । निलम भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म चर्चित गायक÷गायिकाको स्वरमा एक सयभन्दा बढी संगीत गरिसकेकी छु ।’ निलमले विशेषगरी सुगमसंगीतमा ध्यान राख्दै आएकी छन् ।
हालै रिलिज गरिएको ‘आँखैमा…’ बोलको गीत निलमको ‘हरपल’ एल्बममा समावेश छ । जुन एल्बममा निलमको शब्द, संगीत सोलो रहेको छ । ‘आँखैमा…’ गीतको यस भिडियोलाई अहिलेका व्यस्त निर्देशक युगल पोमुले निर्देशन गरेका हुन् । अनु शाह र नानीहाङ राईले मोडलिङ गरेका छन् । गीत अनुसार भिडियो पनि राम्रो बनेको छ । ‘आँखैमा…’ गीतको भिडियो हेर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
Labels: entertainment Video